नेपालीको जिब्रोमा चाउचाउ : यसरी बदलियो खाजा–संस्कृति
केही दशकअघिसम्म नेपालीका लागि अनजान चाउचाउले अहिले खाजाको संस्कृति नै फेरेको छ। नेपाली समाजमा यसले कसरी लोकप्रियता कमायो ?
जेलबाट छुट्दैछन् 'बाघ तस्कर' भारतीय बाबरिया, बाघका लागि फेरि चुनौती बन्ने जोखिम
२०७१/७२ सालताका बाघको चोरी शिकारमा संलग्न भारतका बाबरिया समुदायका केही व्यक्ति पक्राउ परेकोमा अदालतबाट न्यूनतम सजाय पाएर छुटिरहेका छन्, उनीहरु फेरि पुरानै काममा सक्रिय हुनसक्ने प्रहरीको आकलन छ।
खारेजीको निर्णय भएको गरीबी निवारण कोषले निष्क्रिय रुपमै पाउँदैछ निरन्तरता, १९ अर्ब अलपत्र दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरीबी निवारण कोष खारेजीको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा निष्क्रिय संस्थाको संरचनामा खर्च भइरहेको छ।
एसएमएसमा मेसेजिङ एपको धावा, बढ्यो ‘थोक सन्देश’ को बजार मोबाइल डाटाको सहज उपलब्धतासँगै मेसेजिङ एपहरूको प्रचलनले एसएमएसको प्रयोग खुम्चिंदै गए पनि ‘बल्क मेसेज’ को व्यवसाय कायमै छ।
कोरोनाको बहानामा संसद बन्द, सांसदहरूको गुनासो- ‘जनताका कुरा कहाँ राख्ने ?’ १३ महीनादेखि नियमित काम गर्न नपाएको संघीय संसद पछिल्लो चार महीनादेखि कोरोनाको बहानामा बन्द छ। यस्तो महामारीमा झन् जाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि (सांसद) हरूले पनि बलियो गरी संसद बैठकको माग गरेका छैनन्।
फोरजी विस्तारमा बल्ल बढ्दैछ टेलिकमको गति, गुणस्तरको गुनासो सम्बोधन होला ?
चार वर्षअघि फोरजी सेवा शुरू गरे पनि प्रक्रिया र संस्थागत खिचातानीमै धेरै समय गुजारेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले बल्ल दायरा विस्तार गर्न थालेको छ। तर, प्रयोगकर्तामा अगाडि रहेको एनसेलले जस्तै गुणस्तर सुधारको काम भने बाँकी नै छ।
प्रहरीले किन लिँदैन जाहेरी ?
हत्या, अपहरण, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा न्याय खोज्ने क्रममा पीडितले पाउने दुःख जाहेरी लिन नमान्ने प्रहरी कार्यालयबाटै शुरू हुन्छ।
संक्रमित भएर आइसोलेसन सेन्टर पुगिन्, सेन्टरमै योग सिकाएर उर्जा भरिदिइन् कोरोना संक्रमण भएपछि तनाव लिएर एक्लै बस्दा झन् मानसिक र शारीरिक समस्या हुन्छ भनेर आफू बसेको आइसोलेसन सेन्टरमै मनिषा श्रेष्ठले योग सिकाइन्। १४ दिनपछि घर फर्केकी उनलाई सेन्टरले फेरि योग सिकाउन आइदिन अनुरोध गरेको छ।
प्रहरी नेतृत्वले ‘सिध्याएका’ चार होनहार अफिसर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमता भुत्ते बनेको चर्चा जनमानसमा मात्र होइन, प्रहरी नै पनि गर्छन् । सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा अनुसन्धानमा अब्बल चार जना प्रहरी अधिकृतले भोगेको भुक्तमानसँग धेरै हदसम्म सही रहेको यो चर्चाको सीधा साइनो छ ।
दशैंले ब्युँतायो पुस्तक बजार लेखक तथा प्रकाशकले हरेक वर्ष दशैंअगाडि नयाँ पुस्तक बजारमा ल्याउँछन्। यो वर्ष दशैंअघि विगतभन्दा बढी नयाँ पुस्तक बजारमा ल्याइए। जसकारण पुस्तकप्रेमीले छानीछानी पढ्ने अवसर पाए।